5 Faa'iidooyinka & Tabaha
Talaado, Disembar 6, 2011 Talaado, Disembar 6, 2011 Jenn Lisak Golding
Toddobaadkan, waxaan weydiinnay booqdayaasheena adoo adeegsanaya Zoomerang hadday waligood iibsan lahaayeen waxyaabo ay ku kabayaan boggooda ama degelkooda:
30% ayaa dhahay Marna! Taasi sax ma ahan!
30% ayaa yiri iibsadaan cilmi baaris ama xog ah
40% ayaa yiri iibsan lahaa content
In kasta oo aan fahansanahay ka laba-labbiska iibsiga waxyaabaha ka baxsan, waxaan ku aragnay natiijooyin wax ku ool ah macaamiisheenna DK New Media. Mararka qaarkood, waxaa fiican inaad ka fikirto inaad iibsato waxyaabaha ka baxsan dibadda sidii aad u qaadan lahayd qandaraasle. Miyaad shaqaalayn lahayd qof kaa caawiya Ololahaaga Bixi Halki Taabasho (PPC)? Markaa maxaad u kiraysan la'dahay qof kaa caawiya inaad sida ugu badan uga faa'iideysato waxyaabahaaga? Waa kuwan qaar ka mid ah faa'iidooyinka iyo talooyinka markaad isticmaaleyso waxyaabaha ka baxsan:
1. Waxyaabaha la soo iibsaday ayaa waqtiga kaa badbaadinaya!
Inteena ugu badan ayaa nagu soo qulqulaya emayl, mashaariic, iyo yoolalka kale ee suuqgeynta inta lagu jiro maalinta shaqada. Adoo adeegsanaya waxyaabo ka baxsan, waxay ku siinaysaa fursad inaad diiradda saarto waajibaadkaaga kale iyo yoolalkaaga suuq ahaan. Intaa waxaa sii dheer, waayo-aragnimadeena, u-soo-celinta maadooyinka ayaa ah mid si dhakhso leh u dhaqso badan, oo haddana ka sii wanaagsan, waxay kaa badbaadineysaa inaad waqti u hesho baaritaanka mowduucyada qaarkood, taas oo qaadan karta muddo ka dheer inta dhab ahaan loo qorayo qoraalka maqaalka ama waxyaabaha ku jira!
2. Waxyaabaha la iibsaday waa in lagu hagaajiyaa raadinta.
Mid ka mid ah yoolalka ugu waaweyn ee laga kooban yahay ayaa ah inuu kaa caawiyo dadaallada ku habboon hagaajinta mashiinka raadinta. Inta badan qorayaasha ka kooban mawduucyadu waxay leeyihiin fudud, haddii aan horumarsanayn, fahamka meelaynta erayga muhiimka ah, fududaynta goobta, iyo tagsyada la xidhiidha ee khuseeya. Haysashada qoraalka, keyword-ka hodanka ku ah bartaada internetka ama websaydhka ayaa ah waddo dheer oo lagu gaadho yoolalkaaga raadinta.
* Waxaan kugula talin lahaa markaad raadineyso qorayaasha mawduucyada si aad u hubiso in fahamka SEO uu qayb ka yahay adeegooda. Maskaxda ku hay inaad diyaar u tahay inaad u siiso keywords aad bartilmaameed u tahay qorayaasha mawduucyada si loo hubiyo tayada tayada raadinta.
3. Samee rajooyin cad marka aad iibsaneyso waxyaabaha ku jira.
Markaad raadineyso nuqul qoraa, hubi inaad si cad uga muuqato waxyaabaha aad ka fileyso iyo nooca waxyaabaha aad ka rabto bartaada. Sidoo kale, noqo mid faahfaahsan sida ugu macquulsan markaad la hadlayso iyaga. Haddii aad fileysid in qoraalladaada blog-ka la soo gudbiyo 5 galabnimo Jimcaha, markaa deji rajadaas. Haddii aad rabto in nuxurkaagu ahaado mid ujeedo leh halkii aad ka ahaan lahayd mid shakhsiyadeed, hubi inay taasi cad tahay sidoo kale.
Waxa kale oo jira heerar kala duwan oo ah waxa ku jira. Hubso markaad lahadleyso qorayaasha nuxurka ah inaad ku cadahay heerka tayada aad rajeyneysid waxay kuxirantahay aqrintaada.
4. Waxaad ku siisaa jawaab celin qayb kasta oo ka mid ah waxyaabaha aad iibsato.
Xitaa isbeddelada ugu yar waxay macnaheedu noqon karaan adduunyo kala duwanaan ah. Marka qoraa nuxurkiisu soo gudbiyo qoraal dib u eegistaada, hubi inaad dib u soo celiso isbeddeladaada markaad dhammeyso si ay dib ugu eegaan oo ay u arkaan waxa aad beddeshay. Tusaale ahaan, waxaad doorbidi kartaa dhibcaha rasaasta inta qoraaga nuxurkiisu isticmaalayo jajab. Ama haddii aadan jeclayn marka nuxurka uu adeegsanayo ereyada "adiga" ama "I," u sheeg iyaga.
5. U diyaari qorayaasha nuxurka ah marin u helka warbixinta.
Maaddaama ay ka kooban tahay boggaaga, sii qorayaashaada mawduucyada tirakoobka cabbirka iyo Analytics qayb kasta oo ka mid ah waxyaabaha ay ka bixiyeen. Mararka qaar, habka ugu fudud ee loogu sheegi karo qoraa nuxurka ah waxyaabaha ay ka kooban tahay tan ugu fiican ayaa tusaysa natiijooyinka. Sidan, waxay dib u eegi karaan nuxurka ay soo bandhigeen oo ay arki karaan sida ay ugu soo koobi karaan qaabka ama qaabka qoraalka qaybaha ay ku xiga.
Xitaa haddii aad ka labalabeysid, hoos u dheji! Weligaa ma ogaan doontid illaa isku daygaaga, sax?
Tags: Content Suuqqorayaasha contentnuqul qorayaashawaxyaabaha ku jira dibeddaiibsaday contentwax iibsashadazoomerang
Qiimaha Suuqgeynta Facebook
6, 2011 at 10: 37 PM
Qof baa wax ii tilmaamay hal mar it gabi ahaanba maskaxdayda way bedeshay.
Madaxweyne Obama wuxuu leeyahay qoraa khudbad. Madaxweynuhu malaha waa mid ka mid ah af-hayeennadii ugu fiicnaa ee aan taariikhda ku soo marnay - dhiirrigelin, fikir iyo dhif caajis ah. Uma maleynayo inuu ka yareyn doono khudbadiisa isagoo og in qof kale qoray erayada. Weli waxaan aaminsanahay inay iyagu leeyihiin. Waxaan u maleynayaa inay taasi tahay waxa qorayaasha waawayn ee waaweyn ay sameeyaan… waxay awoodaan inay qabtaan nuxurka shirkadda ama shakhsiga oo ay qabtaan shaqo fiican oo ay kula wadaagaan. Waqtiga kaliya ee aysan sax aheyn waa marka aadan run ahaan aaminin waxa ay yiraahdeen ama ay si qaldan kuu sheegaan… laakiin taasi waa masuuliyadaada inaad hubiso inaysan dhicin! Post weyn, Jenn!
Sally Duqa magaalada
7, 2011 at 1: 38 PM
Waxaan hadda la imid bartaada oo waxaan xiiseynayay natiijooyinkaaga sida qof u qoro baloogyada ururada kale! Waxaan la yaabanahay in dad badani aysan tixgelin doonin inay bixiyaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin, laga yaabee inay ka fekerayaan shaqsi halkii ay ka noqon lahaayeen baloogyada shirkadaha.
Waxaan rajeyneynaa inta udhaxeysa inaan dadka ka dhaadhicin karno inay caadi tahay, runtiina ay tahay fikrad aad u wanaagsan, si aan u helno qof kale inuu kuu qoro bartaada!
Waxaan rajeynayaa inaan raaco qoraaladaada.
7, 2011 at 4: 14 PM
Waad ku mahadsantahay faalladaada, Sally! Runtii waan la yaabay in dad badani aysan u adkeysanaynin waxyaabaha ka baxsan dibadda marka la eego wada sheekaysigii aan dhex maray sanadkii la soo dhaafay ama sidaas. Anigoo ah blogger shaqsi ah, kamaan baahin laheyn waxyaabaha ku saabsan bloggeyga gaarka ah (sababtoo ah waxaan jeclaan lahaa inaan waqti ku qaato sameynta waxyaabahaas), laakiin shirkado badan ama baloogyo ganacsi, wax dhibaato ah uma arko. Runtii waan taageersanahay.
Iyo sida Doug u yidhi, waxaa jira tan tusaalooyin adduunka dhabta ah oo ay qorayaasha guurguurku kaga jiraan asalka. Haddii aad ku qanacsan tahay kuwaas, markaa maxaad tan ula noqon weyday? Mar labaad waad mahadsantahay!
Oktoobar 12, 2016 at 10:41 AM
In kasta oo kani yahay qoraal duug ah, haddana waxaan ku fikiray inaan si uun wax u sheego. Waxaan gabi ahaanba ku raacsanahay iibsashada waxyaabaha laga helo ilo dibadeed. Sanadihii la soo dhaafay waxaan dhisay koox wanaagsan oo qorayaal gudaha ah oo aan mar walba isku halleyn karo waxyaabo aan caadi ahayn. Laakiin markay buuxdhaafaan, waa inaan adeegsadaa ilo ka kooban dibedda si aan daboolka uga qaado! Dhibaatadu waxay ahayd helitaanka meel aan ka iibsado waxyaabaha aan dareemay inay ku habboon yihiin heerarkeyga maxaa yeelay waxaan ahay qof xakameynaya maaddada! Waxaan adeegsaday ku dhowaad ilo kasta oo aad ka fekeri karto waxaanan u tuuray badankood dhinaca sababao kala duwan awgood. Sanadkii la soo dhaafay, waxaan degay LPA (LowPriceArticles.com). LPA waa cilada ugu fiican ee aan heli karo. Dib ugu soo noqoshada amarradayda iyo tayada ayaa si gaar ah ugu fiican qiimaha. Waxaan ka dalbadaa qiyaastii 200 qodob bishiiba iyaga oo kaliya waxaan u dirtay dhawr dib u eegis. Miyaad ka heli doontaa maqaallada nooca qoraalka ah? Nope. Laakiin wixii aan u baahanahay, way ii shaqaysaa aniga.